संविधान बनेर राष्ट्र हार्नु हुँदैन : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र | सप्तरी जागरण
संविधान बनेर राष्ट्र हार्नु हुँदैन : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
Posted by वैद्यनाथ यादव on June 3, 2016 in जिल्ला समाचार
राष्ट्रको असफल अवस्था अन्त्य गर्न नेपाली जागरुक हुनुपर्छ
आमूल परिवर्तनको नारामा खडा गरिएको नेपालभित्रको परिवर्तित सन्दर्भ अहिले आम मूल्यांकनको विषय बनेको छ । जनता नै सर्वोपरि हुन्– लोकसम्मति नै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समृद्धिको आधारस्तम्भ हो भन्ने नेपाली राजसंस्थाको ऐतिहासिक परम्परा र सनातनी प्रचलन हो । सुदृढ राष्ट्रियता– राष्ट्रको अखण्डता– राष्ट्रको अटल सुरक्षा तथा समावेशी प्रजातन्त्र र समन्वयकारी– सामाजिक एकता नै नेपाली राजसंस्थाको वैभव हो । परम्पराको त्यही राष्ट्रिय धर्म निर्वाह गर्दै आजभन्दा १० वर्षअघि मैले आफ्नो विरासतबाट विश्राम लिएको हुँ र अग्रगतिका निमित्त मार्गप्रशस्त गरिदिएको हुँ ।
परिवर्तनपछि बितेका १०–११ वर्षभित्र हुनुपर्ने कुरा केकति भए र नहुनुपर्ने तमासा, बितन्डा र विडम्बना केके भए ? नेपाली जनतामा त्यसको हेक्का हुनैपर्छ । समय, परिस्थिति, नियति र घटनाविधिले मान्छेको जीवनक्रममा पनि आरोहअवरोह आउँछन्– घामछाया पर्छन् । दशरथपुत्र रामले पनि बनबास जानुपर्‌यो र असम्भव सुनौला मृगको छलका पछि दौडिनुपर्‌यो, लंका प्रवासमा पुग्नुपर्‌यो । तर अन्त्यमा भगवान् रामचन्द्रले लंकामा विभीषण र लक्ष्मणको प्रस्तावलाई दुत्कार्दै भनेका थिए– सुनैसुनको राज्य भए पनि लंका मेरा लागि प्रिय छैन– म आफ्नै अयोध्या फर्कन्छु । मलाई मेरै अयोध्या स्वर्गभन्दा महान् छ । हो, हामीले पनि हाम्रो जीवनमा आफ्नो मातृभूमिप्रति त्यस्तै महानतम् भावना राख्नुपर्छ । हामी सबैमा त्यस्तै राष्ट्रप्रेम हुनुपर्छ ।
देशका विभिन्न भूभाग र धर्मस्थलको यात्रा क्रममा देखेको–सुनेको कुराबाट मैले अनुभव गरेको विषय हो– देश निरन्तर जर्जर हुँदैछ र देशवासीहरू निरन्तर धर्मरमा पर्दै गएका छन् । लोकतन्त्रले लोकको हित गर्नुपर्छ, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्छ, समाजमा शान्ति र समृद्धिको स्थिति बनाउनुपर्छ अनि साँचो प्रजातन्त्रको आडमा सबै वर्ग, समुदाय र सिंगो राष्ट्रलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । तर ती सब राष्ट्रिय आदर्श आज किन भताभुंग हुँदैछन् ? प्रश्न सबैतिर यही छ ।
समय, परिस्थिति, नियति र घटना विधिले मान्छेको जीवनक्रममा पनि आरोहअवरोह आउँछन् । मलाई संविधानको होइन, राष्ट्रको विकट अवस्थाको चिन्ता छ ।जुनसुकै हैसियतमा पनि म जन्मभूमिलाई कर्मभूमि ठान्छु ।
राष्ट्र रहे हामी रहन्छौं र हामी ठीक ठाउँमा, ठीक ढंगले रहे राष्ट्र रहन्छ । त्यसैले राष्ट्र बचाउन, राष्ट्रियताको संवद्र्धन गर्न र सबै राष्ट्रवादीको दुःखदर्द हटाउन दूरदर्शी दृष्टि चाहिन्छ । सही, स्वच्छ र समन्वयकारी नेतृत्व चाहिन्छ । सबैको सर्वमान्य दरो मियो चाहिन्छ । जनताको आशा, भरोसा र आस्थाको पर्खाल उसै भत्काएर हुँदैन– त्यसमा जनताको अन्तर्मनको ज्ञान पनि बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनताको मन कताकता यस्तैयस्तै कुराले आज खिन्न र खण्डित बन्दै गएको मेरो अनुभव छ । राष्ट्रिय गतिविधि निरन्तर ऊध्र्वगामी हुनुपर्छ– अधोगामी होइन । यसका निमित्त निरन्तर निश्चित गतिमा राष्ट्रिय विधिविधानको सञ्चालन हुनुपर्छ ।
तर प्रश्न उठेको छ– त्यो स्थिति आज किन अवरुद्ध छ ? बितेका १०–११ वर्षमा केकस्ता, केकति सरकार आए ? राष्ट्रको गहनतम जिम्मेवारी बहन गरेकाहरूले केके भने, केके गरे– त्यो कुरा हाम्रो अघिल्तिर छर्लंग छ ।
सदा स्वतन्त्र, सदा स्वाभिमानी र सदा पौरखी राष्ट्रका रूपमा चिनिएको नेपाल अहिले यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा किन र कसरी ? भन्ने प्रश्न पनि जनस्तरमा व्याप्त छ । आफ्नो तालासाँचो आफैंले बलियो पारेर आफ्नो जोडजोगाउ आफैंले गर्नुपर्छ । क्षणिक स्वार्थपूर्तिका निमित्त हामी लहैलहैमा लाग्नु हुन्न– यो नेपालीहरूको पुख्र्यौली मान्यता हो । तर त्यस्ता राष्ट्रिय मान्यता र हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता आज कसरी मासिँदै गएको छ– सोचनीय छ ।
सबैका कानले राम्रो सुन्न पाउनुपर्छ र सबैका आँखाले राम्रो देख्न पाउनुपर्छ । तर देशभित्र र बाहिरबाट अहिले जे सुनिन्छ र नेपालमा जे देखिन्छ, त्यो कति राम्रो छ ? यो पनि यतिखेरको गम्भीर प्रश्न हो । नेपालको आकृति अग्लो छ तर स्थिति होचो छ अनि नेपालको प्रकृति असाध्यै राम्रो छ तर परिस्थिति निकै नराम्रो छ– यस्तो अभिव्यक्ति पनि मैले सुन्ने गरेको छु । नेपालले गति पाउनुपर्छ, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र स्वाभिमान बढाउनुपर्छ र हिमाल–पहाड–तराई–गाउँ–सहर सबैतिर बसोबास गर्नेहरूले सुख, शान्ति र समृद्धि पाउनुपर्छ तर विद्यमान अवस्था के त्यस्तो छ ? यो यतिखेरको मूल मार्मिक प्रश्न हो ।
राष्ट्रको श्रेष्ठ नीति राजनीति हो तर हाम्रो त्यो मूल नीति आज कसरी भूलको स्थितिमा छ– सबैले बुझ्दै गएको कुरा हो । राष्ट्रको नीति मान्यता र मौलिकता सदा स्पष्ट, खुलस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ– त्यो त्यस्तो किन छैन ? त्यो कुरामा हामी सबैको सदा सचेष्टता रहनुपर्छ ।
राष्ट्रको विद्यमान असफल अवस्था अन्त्य गर्न अन्ततः नेपाली जनता नै जागरुक हुनुपर्छ– यो मेरो अन्तस्करणको धारणा हो । परिवर्तनशील समय–प्रवाह निरन्तर प्रतिफलमुखी हुनुपर्छ, समयको छालमा बग्ने तर ठीक ढंगले वारपार गर्न नसक्दा दुर्घटना निम्तिन्छ । मुलुकले गति लेओस्– विधिविधानले निकास पाओस् र सबै क्षेत्रमा निरन्तर विकास होस् भन्ने नै हाम्रो कामना हो– हामी सबैको भावना हो ।
तर बाटो कहाँ, कसरी बिराइयो र यस्तो अलमलमा किन पारियो, हाम्रो साझा चासोको कुरा यही हो अहिले । हेरौं, देखौं, सुनौं, बुझौं र समीक्षा गर्दै जाऔं– यो हाम्रो मानवीय स्वभाव हो तर सिंगो सबल राष्ट्र– सुदृढ राष्ट्रियता– सबैलाई एकत्रित र समुन्नत पार्ने सुन्दर प्रजातान्त्रिक शासनशैली हामीलाई चाहिन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सर्वोत्तम हित नै हो ।
राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ, राष्ट्रले निश्चित विधिविधान र सुशासन पाउनुपर्छ र यसका निमित्त कुशल ढंगले राष्ट्र सञ्चालनको सुव्यवस्थापन हुनुपर्छ । अहिले तदनुरूप केही हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामी कसैको छलछाम र भ्रमजालमा पर्नु हुँदैन । कोही कसैको तुच्छ स्वार्थपूर्तिका निमित्त हामीले हाम्रो अस्तित्वलाई मास्नु हुँदैन । सबै नेपाली सुखी होऊन्– सबै नेपाली एकआपसमा मिलिजुली बसून्, रमाऊन् र हाम्रो राम्रो नेपाल अझ राम्रो बनोस्– हाम्रो कामना र चाहना यतिमात्र हो ।
मलाई संविधानको चिन्ता होइन, राष्ट्रको विकट अवस्थाको चिन्ता छ । राजनीति गर्न भनेर विभिन्न पात्र र चरित्रहरूले मेरो नाम प्रयोग गरेको भन्दै मेरा शुभेच्छुकहरूले स्वाभाविक जिज्ञासा पनि राखेका छन् मसँग । म कुनै दल, व्यक्ति वा चरित्रको सूक्ष्म आकार होइन, मसँग समग्र राष्ट्रको सिंगो विचार छ । म सबै नेपालीलाई समभावका साथ माथि उठाउन मियो अवश्य बन्न सक्छु तर कोही कुनै दल वा व्यक्तिविशेषलाई माथि उठाउने कडी म बन्न सक्दिनँ । मेरो हैसियत त्यो होइन । जनतालाई दिएको आश्वासनप्रति जबाफदेही बन्ने दायित्व उनीहरूको हो ।
मेरो भ्रमण जनतासँग सामीप्य बढाउन र समयसन्दर्भको आत्मबोध गराउन सफल ।म सबै नेपालीलाई समभावसाथ माथि उठाउन मियो बन्न सक्छु ।
सबैको सहभागिता हुने, सबैको अन्तस्करणको मनोभाव बुझ्ने र कसैलाई निषेध नगरी भयरहित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा आफ्नै राष्ट्रिय अवस्थाअनुकूल नभएको संविधानप्रति मेरो पनि असहमति हुनु स्वाभाविक हो । संविधान कसका लागि, के कुराका लागि, कस्तो विचारको र कुन प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले ख्याल राख्नुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिद्वारा नै जनताको हित गर्ने र मुलुकको भलो गर्ने संविधान बन्नुपर्छ तर विगतमा त्यो तोकिएको समयमा किन बन्न सकेन ?
त्यसको सही समीक्षा पनि हुनुपर्छ । हाम्रो आफ्नो राज्यव्यवस्थाको सही बाटो हामी आफैंले बनाउनुपर्छ । आफ्नै मौलिकपन हाम्रो संविधानमा झल्किनुपर्छ ।
संविधान बनाएर राष्ट्र हार्नु हुँदैन । राष्ट्रको अस्मिता मर्नु हुँदैन । विभिन्न मत, धारणा, सिद्धान्त र विचार फरक हुनु बहुलवादी राजनीति, संस्कृति र पद्धतिको स्वाभाविक विशेषता हो । तर जहाँसम्म सिंगो राष्ट्रको धारणा र मान्यताको कुरा आउँछ त्यहाँनिर सबै मान्य, समन्वयपूर्ण र सामञ्जस्यको अवस्था रहनुपर्छ । मेरो मत, मान्यता र आदर्श भनेकै त्यही सर्वसम्मत राष्ट्रियता हो । देशका सबै जातजाति, वर्ग, समुदायलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने र सबैको समान उत्थान गर्ने समावेशी विधिविधान हामी आफैँ मिलेर बनाउन सक्नुपर्छ ।
मेरो देश भ्रमण
जुनसुकै हैसियतमा रहेबसे पनि मैले आफ्नै जन्मभूमिलाई कर्मभूमि ठान्ने मान्छे हुँ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि म देशभक्तिमा नै आशक्ति राखेर आफ्नै मातृभूमिमा रमाउने मान्छे हुँ । आम नेपालीको दुःखसुख नै मेरो दुःखसुख हो । गर्वका साथ स्वाभिमानी स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्ने र नेपालीत्वको दृष्टि बोकेर अघि बढ्न खोज्ने मेरो नानीदेखिको बानी हो । मलाई लाग्छ धेरैधेरै वीर पौरखी नेपालीहरू यही मान्यता राख्छन् । हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न भूभागको भ्रमण गर्ने त्यहाँका धर्मस्थलहरूमा पुगेर देवदेवीको दर्शन गर्ने तथा जनमनोभावना बुझ्दै समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायका व्यक्तिविशेषसँग भेटघाट गर्ने नै मेरो देश भ्रमणको उद्देश्य हो ।
जनताको मन, मर्म बुझ्न एवं जनताका माझ जान मलाई कुनै निश्चित समय र अवसर चाहिँदैन । एक देशभक्त व्यक्तित्वको हैसियतमा जतिखेर पनि म जनतासँग नजिक रहन चाहन्छु । देशमा विभिन्न भूभाग र मठमन्दिरका द्वारहरू मेरानिम्ति सधैं खुला छन् । नेपाली जनतासँग सामीप्य बढाउने र समय सन्दर्भको आत्मबोध गर्ने काममा मेरो यस्तो भ्रमण फलदायी रहेको मैले अनुभव गरेको छु । मेरो देश भ्रमण बिल्कुल राजनीतिसँग लक्षित छैन, मलाई त्यस्तो राजनीति गर्नु पनि परेको छैन । मेरो भ्रमणको आशय कुण्ठित नेपाली समाज र समयसापेक्ष राष्ट्रिय सवालसँग गाँसिएको छ । यसलाई मैले पवित्र धार्मिक, विशुद्ध सामाजिक एवं राष्ट्रिय चिन्तनका रूपमा लिने गरेको छु ।
अब के ?
आजका अनेकौं पीडा, जर्जरता– व्यथा, वेदना र संकटग्रस्त तथा अन्योलग्रस्त अवस्थामा– हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व के हो ? हामीले के गर्ने हो र हाम्रो गन्तव्य के हो ? यसबारेमा पनि हाम्रो स्पष्ट सोचाइ हुनुपर्छ । हामी पहिले नेपाली बनौं– नेपाललाई नै हामीले पहिले आफ्नो हृदयकेन्द्र बनाउनुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल रह्यो भने नै हामीले ढुक्क भएर ‘हामी नेपाली’ भन्न सक्छौं । राष्ट्रियता– हाम्रा पितापुर्खादेखिको हाम्रो सम्पत्ति हो । हामीले त्यही नेपाली राष्ट्रियताको चुरो समातेर अघि बढ्नुपर्छ । आफ्नो जन्मभूमि नेपाललाई माया गर्ने त्यसप्रकारको सबल राष्ट्रियतालाई समात्दै हामीले हाम्रो सुदृढ राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुपर्छ । विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्मसंस्कृति, भाषाभेषका हामी सबै नेपाली त्यसप्रकारको राष्ट्रियतामा आबद्ध भएर एक ढिक्का हुन सक्यौं भने हाम्रो स्वतन्त्र स्वाभिमानी अस्तित्वमा कसैले आँच पुर्‌याउन सक्दैन ।
सुदृढ राष्ट्रियता र सबल एकतापछि हाम्रो निमित्त अर्को आवश्यक विषय हो– हाम्रो शान्ति र हाम्रो सुरक्षा । हामी सबै हाँसीखुसी बसौं, बाँचौं । हामी कोहीलाई अशान्ति र असुरक्षाले चिन्तित नपारोस् । हामी निर्भय भएर बाँचौं । परस्परमा नेपालीत्वको नाता बोकेर बाँचौं । नेपालीत्वको पहिचान हामीले हरहालतमा राख्नैपर्छ– हामीलाई फुटाएर, हामीलाई हाम्रो अस्तित्वबाट गिराएर र हाम्रो आफ्नो मौलिकताबाट हटाएर कोही अरूले आफ्नो कुत्सित लक्ष्य पूरा गर्न खोज्छ भने त्यसको प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ ।
विकास हामीलाई चाहिएको हाम्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विनाशका अनेकौं छिद्रहरूलाई टाल्दै हामीले राष्ट्रको विकासको गति अघि बढाउनुपर्छ । हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं परम्परागत सीपको प्रयोग र उपयोग गरेर हाम्रो विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालको स्रोतसाधनमा आधारित हाम्रो विकास हामी नेपालीले नै खोजेको र रोजेको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी हाम्रो विकास गरिबी हटाउने– रोजगारी बढाउने र परावलम्बी अर्थतन्त्रबाट आफ्नो खुट्टामा उभिने खालको हुनुपर्छ । देशमा उद्योगधन्दा खुलून्– त्यसबाट हाम्रो आवश्यकताको परिपूर्ति होस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा टेवा पुगोस् भन्ने कुराको हेक्का हामीले राख्नैपर्छ । जल, जमिन, बन, जडीबुटी तथा खनिज स्रोतका अपार साधन भएको हाम्रो देशमा हामीले तिनै कुराको विकासमा आफ्नो जनशक्ति लगाउन सक्नुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका निमित्त हाम्रो जोड रहनुपर्छ– सदा स्वतन्त्र, शान्त, सुन्दर र साहसको परिचय दिएर विश्व मानचित्रमा नाम कमाएको देश नेपाल– आर्थिक रूपले पनि सबल हुन सक्नुपर्छ । यसका निमित्त हामीले देशी –विदेशी लगानीको राम्रो संयोजन गर्न सक्नुपर्छ ।
शान्ति, विकास र समृद्धिका निमित्त तथा आफ्नो गौरवशाली इतिहासको निरन्तरताका निमित्त हाम्रो राजनीति, हाम्रो गृहनीति र हाम्रो कूटनीति स्पष्ट, खुलस्त र दुरुस्त बनाउनु सक्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो, सिँचाइ, बन, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता विविध क्षेत्रको विकासका निमित्त हाम्रा अघिल्तिर प्रचुर सम्भावनाहरू छन् । ती सब कुराको विकासका निमित्त पनि हाम्रो राजनीतिक पद्धति र हाम्रो योजनाबद्ध गतिविधिबीच सामञ्जस्य हुनु अति आवश्यक छ ।
यी सबैका लागि मुलुकमा सही, स्वच्छ राजनीति, स्थिर, स्वस्थ सरकार आजको आवश्यकता हो । विगतका अनेक अन्योल र अल्मललाई चिर्दै अब हामीले अँगालेको विधिविधानको निश्चित राजनीतिक शासकीय मार्ग स्पष्ट गर्नुपर्छ । के गर्दा हामी सही ठाउँमा पुग्छौं र हामीले पुग्नुपर्ने वास्तविक ठाउँ कुन हो ? हाम्रो स्पष्टता र दूरदर्शी दृष्टिकोण हुनुपर्छ । हतारमा र अहिले कोहीकसैको लहैलहैको लहरमा नपरी, भोलि पछुताउनु नपर्ने गरी, हामीले हामी सबैखाले शक्तिको संयोजनमा हाम्रो मार्ग निर्धारण– हाम्रो आफ्नै स्वविवेक र पारखबाट गरिनुपर्छ ।
युवाशक्ति नै राष्ट्रको त्यो मूल शक्ति हो जसबाट राष्ट्रको समृद्धिका लागि विशिष्ट योगदान हुनसक्छ । तर हाम्रो त्यो होनहार युवा जनशक्ति आज बिदेसिन बाध्य छ । रोजगारी, इलम र कामधन्दाका लागि विश्वका विभिन्न देशमा पलायन भएको छ । राष्ट्र निर्माणका खम्बा युवा समुदायलाई विदेश जान रोक्ने र गएकाहरूलाई फर्काउने अनि उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका व्यापक अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ राज्यको गहन ध्यान जानु आवश्यक छ ।
आधाभन्दा पनि बढी संख्यामा रहेका हाम्रा महिला समुदाय अझै पनि विभिन्न बदनाम, अपहेलना र लाञ्छनाको भागी बन्ने अवस्था रहनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । महिला हिंसा, महिलामाथि हुने विभेद एवं पक्षपातको अन्त्य गरी उनीहरूलाई उपयुक्त शिक्षा, सीप र इलमका काममा संलग्न गराउनु जरुरी छ । त्यसैगरी समाजका अल्पसंख्यक समुदायको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन पनि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो अगाडि टड्कारो देखिन्छ ।
अन्त्यमा नेपाल अखण्डित रहोस्– स्वाधीन रहोस्– हिमाल, पहाड र तराई कतैका पनि कोही राष्ट्रिय भावधाराबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने कुराको ख्याल हामीले राख्नैपर्छ । (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग दमकस्थित हिमालय टी गार्डेनमा युवराज घिमिरेले गरेको साक्षात्कारमा आधारित)अन्नपूर्ण